Wholesale kuyerera rate totizer Mugadziri uye Mutengesi | ANGJI
Muenzaniso Nhamba: XSJ
Zita Rekushandisa: ANGJI
Magetsi: 24VDC kana 85-220VAC
Inzwa Zvinotaurwa chiratidzo: Pulse 、 4-20mA, 0-5V
Rinoshanda: Kune gasi, mhute, mvura yakazara, kuyera uye kutonga.
Kururamisa: ± 0.2% FS
kuburitsa: RS485 maficha 、 4-20mA, Alarm
Uchishandisa nharaunda: - 30 ° C + 70 ° C, neLCD
Kukura: 48mm * 48mm / 96mm * 96mm / 160mm * 80mm
Tsika basa: zvinoenderana neshandisi yemushandisi saizi uye paramende zvinodiwa, dhizaini yemaseketi akasanganiswa.
OLED mavara echiChirungu anoratidza; Signal yekuisa modhi: yekupomba chiratidzo yekuisa (ingobvuma iyo yekushisa chiratidzo); neimwe nzira alarm nzira; 220VAC magetsi magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi magetsi
OLED mavara echiChirungu anoratidza; Signal yekupinda modhi: yekupomba chiratidzo yekuisa (ingobvuma iyo yekushisa chiratidzo); neimwe nzira alarm alarm; neRS485 kutaurirana; 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi
OLED mavara echiChirungu anoratidza; ine tembiricha uye kumanikidza muripo; neimwe nzira alarm alarm; Signal yekuisa modhi inosarudzika: kupisa / ikozvino / magetsi (matatu sarudzo imwe); 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi emagetsi; iine USB data rekutengesa kunze basa
OLED mavara echiChirungu anoratidza; ine tembiricha uye kumanikidza muripo; neimwe nzira alarm alarm; Signal yekuisa modhi inosarudzika: kupomba / ikozvino / magetsi (matatu sarudzo imwe); 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi emagetsi; ine 4-20mA yazvino kuburitsa
OLED mavara echiChirungu anoratidza; ine tembiricha uye kumanikidza muripo; ine maviri nzira alarm alarm; Signal yekuisa modhi inosarudzika: kupomba / ikozvino / magetsi (matatu sarudzo imwe); 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi; ne 4-20mA yazvino kuburitsa; iine USB data rekutumira kunze basa; neRS485 kutaurirana
Vanyori veChirungu vanoratidza, vane tembiricha uye kumanikidza muripo, neyese nzira alarm alarm, 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi
Vatambi veChirungu vanoratidzira, vane tembiricha uye kumanikidza muripo, neiyo imwe alarm chiteshi, ine yega RS485 kutaurirana, 220VAC magetsi magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi
Vanyori veChirungu vanoratidzira, vane tembiricha uye kumanikidza muripo, neyese nzira alarm alarm, ine U disk interface, 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi
Vanyori veChirungu vanoratidza, vane tembiricha uye kumanikidza muripo, neyese nzira alarm alarm, neyese nzira 4 ~ 20mA yazvino kuburitsa, 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi
Vanyori veChirungu vanoratidzira, vane tembiricha uye kumanikidza muripo, iine imwe alarm chiteshi, ine yakasarudzika RS485 kutaurirana, neyese nzira 4 ~ 20mA yazvino kuburitsa, 220VAC magetsi / 12 ~ 24VDC magetsi
Pashure: Kutonhora Heat Totalizer
Zvadaro: Fuel yekushandisa counter
Kuyerera Computer Totalizer
Kuyerera totizer chiratidzo chimbo
Mafuta epurasitiki ekushandisa totizer